Uhlelo Lokumaketha Lokuxhumana - Jinhua Ecubmaker Technology Co., Ltd.
Uhlelo Lokumaketha Oluhambisanayo
Uhlelo lokumaketha oluhambisana ne-Ecubmaker
Sikwazisa konke ukubambisana
Uma une-akhawunti yezokuxhumana
nabalandeli abaningi abavela ku:
Uma ungomunye walaba bobunikazi:
· Umhleli ovela kuwebhusayithi
· Umphathi noma umphathi kusuka esithangamini
· Umkhombe ovela enkampanini yezentengiso
Thola kuze kufike ku-8% ikhomishini ngakho konke ukudluliselwa okuphumelelayo
Thola kufika kuma-8% kumakhomishini ngokudluliselwa ngempumelelo. Thola amakhomishini ngakho konke ukuthenga okufanelekayo, hhayi nje imikhiqizo oyikhangisile. Futhi, amazinga ethu wokuncintisana anokuncintisana akusiza ukukhulisa umholo wakho. Uma unemibuzo, sicela uxhumane nathi:market05@zd3dp.com .
Uma ungumbuyekezi we-youtube onabalandeli be-youtube abangaphezu kuka-100k
Sizimisele ukukunikeza isampula yamahhala esivivinyweni. Ungahlola ngemibono yakho kanye namaphrojekthi bese uyakushicilela ku-inthanethi. Ukuthola umkhiqizo, sicela uxhumane nathi:market05@zd3dp.com .
ake siqale ngohlelo lokumaketha oluhambelana ne-ecubmaker
Uhlelo Lokubambisana lusiza abadali bokuqukethwe, abashicileli kanye nama-blogger ukwenza imali ngomgwaqo wabo. Ngakho-ke ungasebenzisa amathuluzi wokwakha isixhumanisi alula ukuqondisa izithameli zakho kuzincomo zakho, futhi uzuze ngokuthenga okufanele nezinhlelo.
Joyina abadali, abashicileli kanye ne-blog-
gers abahola nge-ecub-
Uhlelo lokuhambisana nomenzi.
Yabelana ngemikhiqizo nezithameli zakho.
Senze ngokwezifiso izinto zomkhiqizo
Thola kuze kufike ku-8% ngokuhlangana okuhlangene
ukuthunyelwa okuvela ekuthengeni okufanelekile
Chofoza lapha ukuze uhlanganyele nathi